Accusations of Financial Misconduct Again Roil Zimbabwe Cricket
Zimbabwe Cricket Chairman Peter Chingoka is back in the line of fire with allegations of financial misconduct coming from provincial cricket chairman Themba Mliswa, who charged this week that Chingoka and an associate diverted millions of dollars.
Mliswa, heading a group of former cricket administrators styling themselves the Black Pioneers Stakeholders, accused Chingoka and Zimbabwe Cricket Chief Executive Ozias Bvute of looting $7.3 million in organization funds from television rights.
Chingoka and Bvute were arrested in 2005 on charges of breaching foreign exchange regulations, but were soon released, and Chingoka retained the chairmanship.
The latest barrage from Mliswa came when Chingoka was out of the country - in India to see Zimbabwe's cricket side play qualifiers for the ICC Champions Trophy.
Reporter Marvellous Mhlanga-Nyahuye of VOA's Studio 7 for Zimbabwe asked Mliswa to detail his latest allegations against Chingoka. interim Cricket Board member Cyprian Mandenge dismissed Mliswa’s charges and said he brought cricket into disrepute.